Siyakwamukela enhliziyweni kaGeorges du Doux - I-Airbnb
Siyakwamukela enhliziyweni kaGeorges du Doux
Colombier-le-Vieux, Auvergne-Rhône-Alpes, i-France
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Pascal
Itholakala enhliziyweni yeGeorges du Doux, iGîte le Doux Marronnier iyindawo ekahle yokuphumula nomndeni noma abangani.
Lapha, isikhathi simile. Ayisekho ingcindezi edolobheni. Beka endaweni yokuthula emaphandleni lapho uzonyakaziswa khona ngengoma yamacicada, yomfula.
Senza konke okusemandleni ethu ukuqinisekisa ukuthi i-cottage iyasebenza kakhulu.
Uzothola esitezi esiphansi:
- Ikhishi elihlome ngokuphelele (umshini wokugeza izitsha, isitofu segesi, i-microwave, i-toaster, igedlela, amabhodwe, amapani, izitsha ...). Izithako eziyisisekelo (usawoti, upelepele, ufulawa, amafutha omnqumo, uviniga) onawo wokupheka.
- Igumbi lokuhlala elinezihlalo ezi-2, usofa onezihlalo ezi-3, itafula lekhofi, i-TV.
- Igumbi lokugezela lapho izindlu zangasese zikhona, ishawa elinethreyi yeshawa engu-90 * 90 kanye nompompi we-mixer, umshini wokuwasha. Sikushiyela okokuhlanza nokokuthambisa indwangu.
Esitezi sokuqala, kunamakamelo okulala ama-3 anemibhede emi-4 isiyonke
Igumbi elisegcekeni: umbhede ongu-1 140 cm + nombhede ongu-1 130 cm onekhabethe elikhulu lengilazi. 3 izindawo zokulala ebusuku nezibani ezi-2 eziseceleni kombhede
Ikamelo lokulala eliphakathi: 1 130 cm umbhede usofa + 1 ideski + 1 ibhokisi lezincwadi lapho ungathola khona izincwadi nemidlalo yebhodi esimweni sezulu esibi.
Ikamelo ohlangothini lomfula: 1 140 cm umbhede + 2 amatafula ebusuku nezibani eziseceleni kombhede etafuleni ngalinye. Ideski elingu-1 kanye nekhabethe elikhulu
Ikotishi linendawo engaphezu kuka-4000 m². Kuyinjabulo ezinganeni ezikwazi ukudlala ibhola nokunye okunjalo nasezinjeni ezikwaziyo ukudlala.
Uzothola ifenisha yasengadini enezihlalo eziyisi-6, izihlalo zamadekhi ezi-3, indawo yokosa inyama, izinkuni.
Ukufinyelela emfuleni kusuka ngqo ngemuva kwendawo. Awudingi ukuthatha imoto.
Ibhishi ibhishi langasese elenziwe yisihlabathi semvelo esilethwe umfula. Ngaphezu kosebe lolwandle dlula ujantshi webhayisikili kanye nesitimela sase-Ardèche.
Ungakwazi ukudoba ngelayisensi yokudoba okufanele uyithathe ku-inthanethi ngokubhala ikhadi lokudoba. Ungakwazi ukubhukuda. Ukugqoka izicathulo zamanzi kunconywa kakhulu. Izingane kufanele zigadwe ngumuntu omdala.
Abangane bethu abayizilwane bamukelwa mahhala. Bangaphansi kwesibopho sakho esiphelele.
Ikotishi alinayo i-wifi. Lokhu kungenxa yokuthi sisendaweni yabamhlophe. Kudlula i-Bouygues Télécom, SFR kanye namanethiwekhi MAHHALA kuphela. Uthola inethiwekhi ye-4G ngaphandle kokukhathazeka. Inethiwekhi ye-Orange ithwetshulwe emgwaqeni omkhulu ongaphezu kwesakhiwo.
Uma unenethiwekhi ye-Orange, ungathola ikhadi le-Bouygues Télécom esitolo sikagwayi. Intengo ihluka kusuka ku-€ 5 kuya ku-€ 40
Okokugcina, sifuna ukuhlala kwakho esakhiweni sethu kufane nokuphumula, ukuphumula, ukuhleka, ukubhukuda
Umakhelwane unokuthula kakhulu.
Ngikhuphukela e-gîte kaningi ukuze ngithole ukuthi ukuhlala kuhamba kanjani.
Ngifuna ukuhlala kwabaqashi kube sezingeni eliphezulu
Hlola ezinye izinketho ezise- Colombier-le-Vieux namaphethelo